Masai Mara, safari kuenda | Kufamba Nhau
Masai Mara, safari kuenda
Mariela Carril | | Kenya, Chii chekuona
Masai Mara yakanaka safari kuenda uye inokwezva vafambi vanobva kumativi ese epasi. Kune avo vanofarira mhuka hombe, hapana chiitiko chiri nani pane kuita safari kuburikidza nenyika dzeAfrica, pasi pezuva rinopisa remasikati uye nedenga rine nyeredzi husiku.
Masai Mara ndiye mu kenya uye iri chikamu chenharaunda inozivikanwa kwazvo, iyo Serengeti National Park. Kana imwe yezviroto zvako iri yekuziva Africa, saka nhasi tichaziva izvi zvakasarudzika nzvimbo yekuchengetedza.
Sezvatakataura, iri muKenya, muNarok County, uye Inotumidzwa zita redzinza reMaasai anogara muchikamu chino chenyika uye parwizi Mara. Pakutanga, muma60s apo Kenya yaive ichiri koloni, yakasarudzwa senzvimbo yekuchengetedza mhuka.
Gare gare nzvimbo tsvene iyoyo yakawedzerwa kuti ifukidze dzimwe nzvimbo idzo mhuka dzaimbofamba pakati peMara neSerengeti. Yese inogara anenge 1.510 mativi emakiromita, kunyangwe yaimbove hombe. Kune nzvimbo nhatu huru, Sekenani, Musiara neMara Triangle..
Iyo yekuchengetedza inozivikanwa neayo Flora nemhuka. Iyo michero ine maacacias uye mhuka, kunyangwe ichigara munzvimbo yese yakachengetedzwa, yakanyanya kukosheswa uko kunowanikwa mvura uye iri kumadokero kwenzvimbo yakachengetwa. Pano zvinonyanya kugara mhuka dzinofanirwa kuve neepositi kadhi muAfrica shumba, ingwe, nzou, nyati uye zvipembere. Kune zvakare hanga, mvuu uye cheetah uyezve, mbizi. Kune zviuru zvavo.
Tinowedzera Mhara, mbizi, twiza nemazana eshiri dzerudzi. Uye chii icho mushanyi anogona kuita mudura? Masai Mara ndeimwe yenzvimbo dzinozivikanwa dzevashanyi muKenya kunyanya uye Africa zvakajairika. Kushanya kunowanzo kuvezwa muMara Triangle kunova ndiko kune mhuka zhinji kwazvo.
Iyi nharaunda iri pamamita chiuru nemazana matanhatu ekukwirira uye ine mwaka wemvura iyo inotangira munaNovember kusvika Chivabvu, iine huwandu hwekunaya kwemvura pakati paZvita naJanuary uye pakati paApril naMay. Mwaka wakaoma kubva muna Chikumi kusvika Mbudzi. Iyo tembiricha yakanyanya yakatenderedza 30- C uye iyo yakaderera yakatenderedza 20º C.
Kune Mara Triangle inopindirwa nemigwagwa miviri gara wakavhurika, zvisinei nemamiriro ekunze. Ivo ndiMara Serena naKichwa Tembo. Mugwagwa mukuru wekupinda unoyambuka Narok neSuo reSekani. Mukati meiyi nharaunda mune kupihwa kwekugara.
Kana iwe uine mari, kune pekugara kunodhura, senge Mara Serena iyo inopa zana nemakumi mashanu emibhedha yakasununguka kana Little Gavhuna Camp, ine makumi matatu nemabhedha emhando yepamusoro Idzi dzimba mbiri ndidzo chete dziri mukati meMara Triangle. Pamhiri pane Mpata Club, Olonana, Mara Syria, Kilima Camp uye Kichwa Tembo.
Nguva yakanakisa yegore yekuenda pa safari iri pakati paChikunguru naGumiguru, panguva yekutama. Pakutanga kwaNovember naFebruary kune zvakare anoshamisa masikirwo echisikigo, asi kana uchigona kuenda mumwedzi iyoyo zviri nani. Ikozve kunowanzo kuve nekufamba kwemotokari husiku, kushanyira kumamisha eMaasai kuti vadzidze nezvetsika yeguta rino, nhabvu nendege, kudya kwemanheru pasi penyeredzi ...
VaMasai kana vaMaasai ndemamwe emadzinza ekufananidzira eAfrica. Iri dzinza rinofamba-famba setsika nemagariro rakatsaurirwa kufudza uye rakakurumbira kwazvo pazvipfeko zvavo zvetsvuku uye zvemasuki zvine ruvara, kushongedzwa kwemiviri yavo. African tsika uye mhuka dzeAfrica, musanganiswa wakanakisa kana uchifunga nezvekuenda parwendo.
Tichifunga ipapo nezve safaris, iyo yakachengetwa inopa imwe yeakanakisa zviitiko nekuti sekutaura kwatakaita ine mhuka dzose dzekufananidzira dzenyika. Iwo Makuru Mashanu anoshanduka kuita mwaka wekutama, Chikunguru kusvika Nyamavhuvhu, kupinda muBig Nine, asi chokwadi, safari yakanaka chero nguva. Pari zvino Ivo vatove kutora kutora kwekuchengetedza kweiyo 2021 uye 2022 safaris, kubva kudhura kusvika kwoumbozha.
Aya safaris anogona kunge ari epasi kana nendege. Road safaris inozivikanwa kwazvo uye kazhinji kutanga nekuguma muNairobi. Zviripachena, mune 4 × 4 mota kana mumakombi. Rwendo pakati peNairobi neMasai Mara zvinotora maawa ari pakati pemashanu kusvika matanhatus, zvinoenderana nenzvimbo yauchazogara mukati mechengetedzo. Iko mukana wekuita iyi mhando yesafari ndeyekuti yakachipa pane iyo safari safari uye kuti iwe unokwanisa kuona maKenya nharaunda mumunhu wekutanga uye padyo padyo. Izvo zvinokanganisa ndezvekuti iwe unoenda nepasi ...
Mitengo? Mitengo zvinosiyana zvichienderana nenguva yerwendo, asi safari nenzira, hupfumi vhezheni, inotangira pamadhora mazana mana kusvika mazana matanhatu; yepakati vhezheni inosvika kumadhora mazana masere nemakumi mairi nemashanu uye yemhando yepamusoro vhezheni inosvika madhora chiuru.
Kwemazuva mana safari, mitengo inotanga pa $ 665 uye inokwira kusvika ku $ 1200 (yepakati shanduro), kusvika parwendo rweumbozha runogona kusvika kumadhora mazana maviri nemazana matanhatu. Rwendo rwemazuva mashanu rwuri pakati pe $ 2600 ne $ 800 zvichingodaro, nzira yese kuenda kumazuva manomwe-safari. Iyo safari svondo ine yakawanda kana shoma mitengo yakafanana neiyo shanu uye matanhatu mazuva nzendo, saka kana iwe uine nguva vhiki rese iri nyore.
Iye zvino zvine chekuita ne ndege safaris kana Flying Safaris, ivo vari nyore zvakare nekuti nendege unobatana neNairobi neMasai Mara muawa imwe chete. Kune ndege mbiri pazuva uye kana ukasiya mangwanani unosvika pakamba panguva yekudya kwemasikati. Mitengo? Ndege yemazuva maviri safari safari inodhura pakati pe $ 800 ne $ 950, rwendo rwemazuva matatu pakati pe $ 990 ne $ 1400, uye rwendo rwemazuva mana pakati pe $ 2365 ne $ 3460.
Kunyangwe iwe uchisarudza imwe mhando yesafari kana imwe, mota dzinoshandiswa pasi ndedzemhando mbiri, dzakatenderwa: Toyota Landcruiser jeeps nemabhazi. Ose ane matenga anokwanisa kuvhurwa kuti afunge nezvenyika dzeAfrica uye ese zvakare ane mawairesi anovaita kuti vataurirane nevanochengeta paki. Chipo chekugara chakasiyanaIzvo zvese zvinoenderana nebhajeti, iwe une makambi ari nyeredzi shanu uye dzimwe dzakareruka uye kunyangwe dzimba dzekurenda dzakazvimirira.
Saka chaizvo safari muMasai Mara Reserve inogona kusanganisira kukwira jipi, kubhururuka nendege, kushanyira misha yeMasai, kukwira, kukwira bhiza uye kudya kwemanheru.s pasi peredzi munzvimbo dzemisasa. Iko kuziva uye kuona mhuka dzemu Africa nenzvimbo dzekutanga ruoko.
Chikamu chekupedzisira cheruzivo, mubhadharo unobhadharwa kupinda mudura Zvinoenderana nekuti pekugara yawasarudza iri kupi. Kana iwe ukagara mukati, mukova uri makumi manomwe emadhora pamunhu mukuru kwemaawa makumi maviri nemana uye mazana mana nemakumi matatu evana vari pasi pemakore gumi nemaviri. Kana imwe nzira yakatenderedza, iwe ukagara kunze kwenzvimbo huru yekuchengetera, mukova unodhura madhora makumi masere kwemaawa makumi maviri nemana uye madhora makumi mana nemashanu pamwana.
Ichi chiyero chinoshanda kudivi reNarok uye Mara Conservation, mugedhi rekumadokero kwenzvimbo yakachengetwa. Neraki izvi zvinodhura inosanganisirwa mumutengo wekupedzisira wesafaris.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Africa » Kenya » Masai Mara, safari kuenda